थाहा पाउनोस् यी जडीबुटीको कमाल ! – Holistic Monthly : A Leading Magazine for Health & Life Style
थाहा पाउनोस् यी जडीबुटीको कमाल !
नोनी : हेर्दा पिठो खाँदा मिठो !
विशेष गरी समुद्री किनारमा पाइने अम्बाजस्तै किसिमको प्राकृतिक फल हो नोनी । यसको वैज्ञानिक नाम ‘मोरिन्डा सिटिफोलिया’ जुराइएको छ ।
कयौं प्राकृतिक फलमा मानव जीवनका लागि उपयोगी तत्त्व नपाइने कुरै भएन । नोनीमा पनि यस्ता तत्त्व छन्, जो मानव स्वस्थ्यका निम्ति निकै लाभदायक हुन्छन् । नोनीमा पोलिफेनोल, एन्टीअक्सिडेन्ट, एन्टीइरिटेसन, पेनरीलिभरजस्ता तत्त्व पाइन्छन् ।
अरु जुन कुनै फलजस्तै यो फल पनि अवश्य नै तरिका पुर्‍याएर त खानै पर्‍यो । नेपालीमा उखान नै छ नि– ‘खान जाने अमृत, नजाने विष ।’ प्रविधिको यो जमानामा केको चिन्ता छ र ! आजकल धुलो पारेर खानका लागि तयार पारिएको नोनी पनि बजारमा पाइहालिन्छ ।
वयस्क व्यक्तिले एक पटकमा एकदेखि तीन ग्रामसम्म सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । यसलाई दैनिक तीन पटकसम्म सेवन गर्न सकिन्छ । नोनी जुनसुकै समयमा सेवन गर्न सकिने भए पनि विशेष गरी खालि पेटमा सेवन गर्नु उचित हुन्छ ।
के–के हुन् त फाइदा ?
नोनी फलका फाइदै फाइदा छन् । प्रशोधित नोनी हेर्दा पिठोजस्तो देखिए पनि खाँदा भने हल्का टर्रो हुन्छ तैपनि यो स्वास्थ्यका हिसाबले भने निकै लाभदायक फल हो । विशेष गरी महिला तथा बालबलिकाका लागि यो फल अझ बढ्ता उपयोगी छ । पाठेघर, रजश्वलालगायतका समस्या भोगिरहेका महिलाले यसको सेवन गर्दा ती समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
त्यति मात्रै कहाँ हो र ! यसका अरु पनि धेरै फाइदा छन् । नोनीको सेवनले व्यक्तिको प्रजनन् प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा रहन पनि मद्धत गर्छ । त्यसकारण यौन तथा प्रजनन् समस्या समाधान गर्न समेत यो निकै उपयोगी छ । यसले दुखाइ कम मात्रै गर्दैन, तनाव कम गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । यसको अर्थ समस्या हुने व्यक्तिले मात्रै सेवन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । समस्या हुन नदिन पनि यसको सेवन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, महिलाले मात्र होइन, जुनसुकै उमेर समूहका पुरुष–महिला सबैले सेवन गर्न सकिन्छ ।
नीम : छाला चम्काउने जडीबुटी
विशेषतः नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रशस्तै पाइने प्राकृतिक जडीबुटी हो नीम । यसको अर्थ पहाडी भूभागमा नपाइने भने होइन । धेरथोर सबै क्षेत्रमा यो उपलब्ध छ ।
एउटा स्वास्थ्यबर्द्धक प्राकृतिक जडीबुटी भएको नातले यसमा जीवलाई लाभदायक तत्त्व प्रशस्तै नपाइने कुरै भएन । नीममा एक्स्ट्रयाक्टजस्तो तत्त्व पाइन्छ, जसले छालाको साफसफाइ तथा सुन्दरतामा निकै राम्रो काम गर्छ ।
छालालाई फाइदा गर्ने भएपछि त यसको व्यापक प्रयोग गरिने नै भयो । आजकल बजारमा नीमबाट बनेका थरीथरी साबुन पाइन्छन् । नीममा चिउरीको तेल, जैतुनको तेल, रुद्राक्षको धुलो इत्यादि मिसाएर तयार पारिएको नीम साबुन समेत बजारमा पाइँदो रहेछ; जो ‘नीमसोप’ (साबुन) का नामले चिनिन्छ । नीमबाट बनेको साबुनले मात्रै पनि नुहाउन सकिन्छ ।
‘नीम सोप’ को प्रयोगले छालामा आउने खटिरा, लुतो डन्डिफोरजस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ । छालै सफा भएपछि चमकता त आउने नै भयो । त्यति मात्रै कहाँ हो र ! यो साबुनले टाउको नुहाउँदा कपालमा चाया पर्नेजस्तो समस्याबाट बच्नुका साथै कपाल झर्ने समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ । कपाल झर्ने समस्याबाट पनि बचिने अनि छाला पनि सुन्दर हुने भएपछि सुन्दर भइएन त !
गानोदर्मालाई नेपालीमा रातो च्याउका नामले चिनिन्छ । यो उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा पाइने प्राकृतिक जडीबुटी हो । यस्तो जडीबुटीमा अवश्य नै फलदायी तत्त्व पाइन्छन् ।
गानोदर्मामा जिपोलिसेक्राइड, अर्ग्यानिक जर्मानियम, ट्राइटर पेन्स तथा एन्टीअक्सिडेन्टजस्ता शरीरका निम्ति लाभदायक तत्त्व पाइन्छन् । यसमा पाइने तत्त्वहरूले अवस्य पनि राम्रै काम गर्छन् । तर, पहिले खाने तरिकाबारे चर्चा गरौं–
सबै व्यक्तिले प्राकृतिक स्रोतमै पुगेर यो च्याउ लिनु सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजकाल बजारमा प्रशोधन गरी तयार पारिएको धुलो तथा क्याप्सुल पाइन्छ । यसको धुलो विशेष गरी बिहान, खालि पेटमा एकदेखि तीन ग्रामसम्म खान सकिने आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सकको सुझाव छ । पानीसँग वा कफीका रूपमा ४–४ घन्टाको फरकमा दैनिक तीन पटकसम्म खान सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
पहिलो कुरा त गानोदर्माको नियमितसेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्ने भएकाले रोग लागेकाले मात्रै यसको सेवन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसको अर्थ, सामान्य अवस्थाको व्यक्तिले समेत सेवन गरी मजबुत बन्न सकिन्छ भन्ने हो ।
गानोदर्माको नियमित सेवन गर्नाले शारीरिक मात्रै कहाँ हो र मानसिक रूपमा समेत स्वस्थ रहन सकिन्छ । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ भएपछि शारीरिक स्फूर्ति त हुने नै भयो, स्मरणशक्तिको वृद्धि र तीक्ष्ण दिमागी क्षमताको विकासमा समेत यसले मज्जैले फादा पुर्‍याउँछ ।
सामान्यतः सबै किसिमका रोग भएका तथा जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले यसलाई खान सकिन्छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले खाँदा आमा र शिशु दुवैलाई लाभदायक हुने आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सकको सुझाव छ ।
घरको सुगन्धका लागि लेमनग्रास
लेमनग्रास प्राकृतिक जडीबुटी हो । कागतीजस्तै बास्ना आउने भएकाले यो जडीबुटीलाई ‘लेमनग्रास’ भन्ने गरिएको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा घाँसजस्तै देखिने यो जडीबुटी विशेषगरी सुन्दरतासँग सम्बन्धित साबुन, स्याम्पु, सेन्टजस्ता कस्मेटिक्स सामग्रीमा प्रयोग गरिन्छ । यसलाई सोझै अत्तरका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसलाई चियामा हालेर समेत खाइन्छ ।
लेमनग्रासबाट बनेका सुगन्धित तेल नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । बाथरुम सफा गर्न समेत यस्तो तेलको प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोगले बाथरुम त सफा हुन्छ नै, यसको सुगन्धका कारण बाथरुममा किटाणु समेत आउन दिँदैन ।
यसको औषधीय गुण त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सजावटका रूपमा समेत लेमनग्रासको प्रयोग हुन्छ । लेमनग्रास गमला तथा जमिन दुवैमा रोप्न सकिन्छ । हरियो देखिने यसले घरको शोभा बढाउँछ । घर वरिपरी लेमनग्रास रोप्नाले भुसुना, मच्छड आउँदैनन् त्यसैले यसबाट हानिकारक किटाणुबाट बच्त समेत मद्धत मिल्छ ।
घरको शोभा बढाउने, बासनाको काम पनि गर्ने, किटाणु आउनबाट समेत रोक्ने र औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने भएपछि रोप्नु परेन त लेमनग्रास !